पूर्व वडाध्यक्ष काठमाडौं मेयरको रेसमा :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
पूर्व वडाध्यक्ष काठमाडौं मेयरको रेसमा
रोहित खतिवडा काठमाडौं, वैशाख २८
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापित यसपटक पनि एमालेबाट मेयरको टिकट लिने दौडमा थिए। २०५४ सालमा एमालेबाटै मेयर जितेका उनले टिकट हात पार्न थुप्रै दौडधूप गरे। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छनोटमा परे विद्यासुन्दर शाक्य, जो स्थापित मेयर हुँदा वडाअध्यक्ष थिए।
मेयरको उम्मेदवारी घोषणापछि शाक्यलाई उनै स्थापितले जुरूक्कै उचालेर काँधमा बोके। मेयरका अर्का दाबेदार जीवनराम श्रेष्ठले उनलाई सघाएका थिए। यो तस्बिर एमाले कार्यकर्ताका सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्पाप्ति भयो।
त्यो एक दिन मात्र होइन, पूर्वमेयर स्थापित त्यसपछि पनि लगातार शाक्यलाई जिताउन लागिपरेका छन्। निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने अन्तिम दिन बिहीबार हामीले स्थापितलाई सोध्यौं- 'विद्यासुन्दर कस्ता उम्मेदवार हुन्?'
२०५४ मा विद्यासुन्दर २१ नम्बरका वडाध्यक्ष हुँदा मेयर रहेका स्थापितले उनका केही गुण र कमजोरी केलाए।
स्थापितका नजरमा शाक्य पाएको जिम्मेवारी जसरी पनि पूरा गर्ने कर्मठ व्यक्ति हुन्। '२०५४ देखि पाँच वर्ष हामीले सँगै काम गर्‍यौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँ आफूलाई दिएको जिम्मेवारी जसरी पनि पूरा गर्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ। एउटै टिममा काम गर्दा मैले थाहा पाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही हो।'
शाक्य २०४७ सालमा युवा संघको शाखा कमिटी कोषाध्यक्ष हुँदै तत्कालीन मालेको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी राजनीतिमा सक्रिय भएको भने २०३६ सालदेखि नै हो।
निर्वाचन प्रचारमा व्यस्त शाक्यले बिहीबार बिहान एकैछिन बिसाएर जमलस्थित 'यल्लो प्यागोडा' होटलमा रहेको प्रचार कार्यालय आइपुगेका बेला सेतोपाटीसँग भने, '२०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो। म त्यही आन्दोलनमा सहभागी भएँ। त्यसले मेरो राजनीतिक चेतना र दिशा तय गर्‍यो।'
२०३७ सालको चुनावमा उनी बहुदलको पक्षमा भोट माग्न सक्रिय भए। ०४३ सालको निर्वाचनमा पनि जनपक्षीय उम्मेदवारका पक्षमा सक्रियतापूर्वक लागे। '०४६ सालको जनआन्दोलनमा हामी दुईवटा हातमा दुई पार्टीको झन्डा बोकेर निस्किएका थियौं,' उनले भने, 'एउटा हातमा कांग्रेसको र एउटा हातमा कम्युनिस्टको झन्डा थियो। त्यो बेलाको आवश्यक्ता थियो त्यो।'
शाक्य लगनटोलका स्थायी बासिन्दा हुन्। अघिल्लो वर्षको भुइँचालो अघिसम्म पनि उनको तीन पुस्तादेखिका सबै सदस्य सगोल बस्थे। दाजुभाइ छुट्टभिन्न नभएकाले एउटै घरमा २० जनाभन्दा बढी सदस्य बसेका थिए। भुइँचालोले घर भत्काएपछि भने शाक्यको परिवार त्यही टोलमा अलग्गै बस्न थालेको छ। उनको परिवारमा श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्।
'मेरो राजनीतिक जीवनको सुरुआत यही टोलबाट भएको हो,' उनी सम्झन्छन्, 'टोलको क्लबमा आबद्ध भएर सामाजिक काममा लाग्दालाग्दै राजनीति गर्न थालेको हुँ।'
जनआन्दोलनपछि उनी सक्रिय रहेको लगनटोलको श्रीगणेश सेवा क्लब मालेको युवा संघमा विलय भएको थियो। उनी त्यसपछि युवा संघका कार्यकर्ता बनेका थिए। २०४९ सालमा उनले पार्टीको संगठित सदस्यता पाए। यसबीच व्यवस्थापनमा स्नातक सकेर उनले आफ्नो अध्ययन टुंग्याए।
२०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा उनले २१ नम्बर वडाअध्यक्षको टिकट पाए। त्यसबेला देशव्यापी रूपमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा माहोल थियो। काठमाडौंको मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार पिएल सिंह विजयी भए। धेरैजसो वडामा कांग्रेसले नै विजय हात पार्‍यो। यस्तो अवस्थामा पनि जित हात पार्ने थोरै एमाले कार्यकर्तामध्ये शाक्य एक थिए। शाक्यको उमेर २९ वर्ष थियो। लगनटोलमा उनको सक्रियताले नै एमालेको विजय सम्भव तुल्याएको हो।
'टोलका सबै कार्जे-कार्यक्रममा उहाँ खटिरहनु भएको हुन्थ्यो,' स्थापित भन्छन्, 'सरल स्वभाव भएकाले प्राय: सबैले मन पराउँथे।'
शाक्यको अर्को चिनारी आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन हो। 'उहाँ साधारण लुगा लगाउनुहुन्छ तर सफा र चिटिक्क मिलाएर,' स्थापित भन्छन्, 'उहाँको व्यवहार पनि लुगा लगाउने तरिकाजस्तै छ। साधारण तर अनुशासित र पारदर्शी।'
जनतासँग घुलमिल हुनसक्ने खुबी र पारदर्शी तथा सरल व्यवहारले नै उनलाई दोस्रोपटक पनि वडाध्यक्ष जित्न सहज बनायो। उनले लगातार १० वर्ष काठमाडौंको २१ नम्बर वडाका अध्यक्षका रूपका काम गरे। दस वर्ष वडाध्यक्ष हुँदा शाक्यको आर्थिक व्यवहारमा प्रश्न नउठेको स्थापितको दाबी छ।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारविरोधी जनप्रतिनिधिको छवि बनाउन सक्नु नै शाक्यको सफलता हो। यो छविले आज उनलाई मेयरको चुनाव लड्न सहज भएको स्थापित बताउँछन्।
एक दशक वडाध्यक्ष भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो त?
शाक्यले लगाइरहेको कोट तन्काए, टोपी मिलाए अनि मुसुक्क हाँसेर स्वाभाविक सानो आवाजमा भने, 'आत्मसन्तुष्टि हुने तर परिवारलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिन नसकिने।'
जनताको अपेक्षाकै कारण वडाध्यक्षको धेरै समय टोलछिमेकमै बित्ने उनको अनुभव छ। 'सबैले सबै बिहे/भोजमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन्, जानै पर्‍यो,' उनले भने, 'विकास निर्माणका काम हेर्नै पर्‍यो। गाउँघरका स-साना झगडा विवाद मिलाउने काम गर्ने र ठूल्ठूला मुद्दामा पनि उनीहरूको कुरा सुनिदिने गर्नुपर्छ। अधिकांश समय त्यसरी नै बित्छ।'
त्यसो त राजनीतिमा उनको कमाइ पनि यही हो। उनी जनतामाझ राम्ररी चिनिएको पनि यही व्यवहारले हो।
लगभग २० वर्ष स्थानीय निर्वाचन नहुँदा पनि स्थानीय स्तरमा सक्रिय रहने शाक्यको स्वभावमा कुनै तलबितल भएन। उनी पार्टीका काममा लागिरहे र विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्दै काठमाडौं जिल्ला कमिटीका सचिव भए। उनी अध्यक्ष ओलीले विश्वास गर्ने कार्यकर्ताका रूपमा चिनिन्छन्। यसले पनि उनलाई मेयरको टिकट पाउन सहज बनायो।
शाक्य लजालु र अन्तरमुखी स्वभावका छन्। 'मेयर भएपछि त बोलिरहनु पर्छ,' स्थापितले आफ्नो कार्यकाल सम्झिए, 'तर जहाँ काम गर्‍यो त्यस्तै स्वभाव बन्दै जाने हो।'
शाक्यलाई चिन्नेहरु उनलाई नरिसाउने र शान्त स्वभावको व्यक्तिका रुपमा पनि सम्झन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो स्वभाव कमजोरी हुनसक्छ भन्ने स्थापितलाई लाग्छ। उनी भन्छन्, 'यो उहाँको कमजोरी पनि हो।'
स्थापितको अनुभवले भन्छ- मेयर भएपछि विभिन्न किसिमका मान्छे थरीथरीका कुरा लिएर आउँछन्। सबै कुरा हाँस्दै भलाद्मी भएर सुनेर मात्रै हुँदैन। 'कतिपय कुरामा रिसै नउठे पनि रिसाएजस्तो गरेर मिलाउनुपर्छ,' स्थापितले भने, 'उहाँ रिसाउन पटक्कै जान्नु हुन्न।'
शाक्यको चुनावी आधार के त?
स्थापित भन्छन्, 'पार्टी नै शाक्यको सबैभन्दा बलियो आधार हो।'
एमालेको संगठन संरचना र यति नै संगठित चुनावी प्रचारले नै उनलाई विजयी बनाउने दाबी गरे। 'चुनावी प्रचार सुरू हुँदा अवस्था अलि फरक थियो, के हुने हो भनेजस्तो थियो,' स्थापितले भने, 'दस दिनमा पूरै माहोल देखिइसक्यो नि। यस्तो चुनावी माहोल त यसअघिको चुनावमा पनि बनेको थिएन।'
उनका अनुसार पहिले माओवादीलाई गएको अधिकांश भोट एमालेमा फर्किँदैछ। कांग्रेसका मतदातामा उत्साह नभएको उनको ठहर छ, जसमध्ये केहीले शाक्यलाई भोट दिने उनको भनाइ छ। 'उहाँमा खोट लगाउने ठाउँ नै छैन,' स्थापित भने, 'उहाँले आफ्नो वडामा उदाहरण बनेर देखाउनुभएको छ।'
यता राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले खेलिरहेको भूमिकाले पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा जित सहज हुने उनको आँकलन छ। 'माओवादी र कांग्रेसले के गर्छ भन्ने देखियो नि,' उनले भने, 'नाकाबन्दीदेखि महाअभियोगसम्म आइपुग्दा उनीहरूले के गर्छ र एमालेले के गर्छ भन्ने जनतालाई थाहा भइसकेको छ। काठमाडौंको विकास एमालेकै नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भन्ने जनताले बुझेका छन्।' राप्रपासँगको तालमेलले पनि एमालेको स्थिति अझ बलियो भएको उनले बताए।
एमालेमा आत्मविश्वास कतिसम्म छ भने शाक्यको चुनावी काममा केन्द्रीय सहयोग पुर्‍याइरहेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले शाक्यलाई नै अगाडि राखेर भनेका थिए, 'अब हाम्रा लागि चुनाव जितिन्छ कि जितिँदैन भन्ने प्रश्न नै रहेन, चुनाव जितेपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रोलागि महत्वपूर्ण छ।'
शाक्यले १०० दिनमा गर्ने १०१ कामको सूची बनाएका छन्।
महत्वाकांक्षी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने पूर्वमेयर स्थापित सहितको सहयोगमै उनले यी योजना बनाएका हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकासँग स्रोतको अभाव नभएकाले योजना ठूला र महत्वकांक्षी भए भनेर आत्तिनु नपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, वैशाख २८, २०७४, ०७:३०:२९